Actorylọ ọrụ anwụrụ ọkụ ụbọchị ọmụmụ | Ndị na-emepụta ihe na ndị na-enye ndị China onyinye ụbọchị ọmụmụ
N'ogo ọla dijitalụ achicha ụbọchị ọla kọpa
Aha: N'ogbe dijitalụ achicha ụbọchị kandụl kandụl kandụl Kanye: 3 * 4.6cm, igbe pvc: 6 * 16.5cm Nkwakọ ngwaahịa: 460 ngwugwu / kọọọkụ, kandụl dijitalụ nke ọla di mma, nke anaghị egbu egbu na anwụrụ anwụrụ ọkụ. , ndị na-ejide oriọna ogologo oge nwere ike belata nke ọma na ihe ọghọm. Kandụl ụbọchị ọmụmụ bụ ihe ndị ọzọ na-atọ ụtọ ma na-agbakwunye ọ joyụ na ememe ụbọchị ọmụmụ gị.
Wunye katuunu oriọna amam-ihe
Aha: Inye onyinye dị ụtọ kandụl ụbọchị ọmụmụ kandụl kandụl kandụl Kanye: 2.5 * 2.5 * 0.5cm, igbe pvc: 8 * 10 * 2cm Nkwakọ ngwaahịa: 360packs / katọn, candledị kandụl dị ụbọchị kandụl nwere ụdị dị iche iche, dị ka Mickey, Minnie, Snow White, Seahorse Mermaid, Dinosaur na ndị ọzọ. Oriọna ụbọchị ọmụmụ katọn na-eji igbe mpempe akwụkwọ PVC, igbe nke ọ bụla nwere obere kandụl 5. Ọ mara mma nke ukwuu iji chọọ achicha ụbọchị ọmụmụ.
Wunye kandụl achicha ụbọchị egwurugwu nke agba agba aja maka ndo ndo
Aha: Inye achicha ekeresimesi ekeresimesi eji agba agba agba agba agba agba maka emele kandụl: 5 * 3 * 0.6cm, igbe pvc: 7,3 * 15cm Nkwakọ ngwaahịa: igbe 24 / igbe dị n'ime, 720packs / katọn, egwurugwu bụ nrọ maka nwata. Ngwurugwu bụ oge ntoju ntorobịa. Egwurugwu bụ agụụ maka onye ọ bụla ka mmiri zoo ma doo anya. Ka kandụl dijitalụ sonyere gị maka ememme ụbọchị ọmụmụ obi ụtọ! !!
nnukwu onu ogugu akara ubochi achicha eji eme oriri
Aha: nnukwu nha akara ụbọchị ọmụmụ kandụl maka oriri kandụl: 3.2 * 5.2cm, igbe pvc: 9.5 * 4.5 * 1.5cm Nkwakọ ngwaahịa: 720pcs / katọn, igbe dị ： 52 * 34 * 43cm Nnukwu ọnụ ọgụgụ ụbọchị kandụl ụbọchị ọmụmụ na-eji a. Igbe mpempe akwụkwọ PVC, kandụl dijitalụ na-acha odo odo nwere kandụl mara mma. Oriọna ụbọchị ọmụmụ na-eji teknụzụ igwe na teknụzụ mkpuchi. Shapedị ahụ mara mma yana ntụ ntụ ọla edo adịghị adaba. Ọ bụ kandụl ụbọchị ọmụmụ mara mma nke ukwuu, nke nwere ike ịgbakwunye ọmarịcha obodo ...
kandụl taper kandụl, kandụl taper, kandụl votive, kandụl beeswax, kandụl ogidi beeswax, beeswax votive kandụl,